हेटौंडाको बिरुद्धमा यसो भने एमाले नेता महेश वस्नेतले « Onlinetvnepal.com
हेटौंडाको बिरुद्धमा यसो भने एमाले नेता महेश वस्नेतले
Published : 19 January, 2018 10:43 pm
On : प्रदेश, प्रदेश ३
सूर्यविनायक नगरपालिकामा शुक्रबार बिहान भेटिएका एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत शनिबार सल्लाघारीमा पुत्ला जलाउने कार्यक्रमबारे कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै थिए ।
कसको पुत्ला जलाउने ? जवाफमा सांसद बस्नेतले भने- ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको पुत्ला जलाउन लागिएको हो । ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भक्तपुरमा नराखेर हेटौंडा लगिएकाले भोलि तीनैजनाको पुत्ला जल्छ अब ।’
‘भक्तपुरकै नेता नारायणमान बिजुक्छेको पुत्लाचाहिँ किन जलाउने नि ? उनी सरकारमा पनि छैनन्, उनले प्रदेशको राजधानी तोकेका हुन् र ?’
अनलाइनखबरको प्रश्नमा एमाले नेता बस्नेतले भने- ‘बिजुक्छेले भक्तपुरमा प्रदेशको राजधानी चाहिँदैन भने नि त । राजधानी हेटौंडा जानुमा उनको पनि भूमिका देखियो ।’
आखिर भक्तपुरमै प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी चाहिँ किन चाहियो ? यसको जवाफ सांसद बस्नेतकै शब्दमाः
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेशका प्रमुखहरु तोक्ने कुरामा सरकारले अपरिपक्व र विनातयारी काम गर्‍यो । आन्दोलन आफैंले सिर्जना हुने काम गरियो । आन्दोलन रोक्नलाई कुनै वार्ता पनि नगर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसले जनताको आशा निराशामा परिणत गर्ने काम गरेको छ ।
हामीले भक्तपुरबाट ३ नम्बर प्रदेशको बासिन्दा भएर बोल्दाखेरि ३ नम्बर प्रदेशको मुकाम तोक्ने क्रममा ठूलो अन्याय भएको छ ।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलले भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेमध्ये कुन उचित भन्ने मसिनो ढंगले उसले छलफल गर्‍यो । पूर्वाधारहरुको अवलोकन गर्‍यो । यसक्रममा भक्तपुरमा २५० रोपनी जग्गामा अवस्थित शिक्षा विभागको कार्यालय छ । यहाँ ७ वटा शाखा कार्यालयहरु अवस्थित छन् । दुई सयभन्दा बढी कोठाहरु छन् । यो ठाउँमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यालय बनाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो राज्य पुनसंरचनाअनुसार शिक्षा विभाग छुट्टै कार्यालयका रुपमा राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने प्रतिवेदन दिएको सन्दर्भ छ । र, त्योसँगै त्यहाँबाट ५/६ सय मिटरको फरकमा कृषि विकास केन्द्रको तालिम केन्द्र बोडेमा छ । त्यहाँ प्रदेशभाको पार्लियामेन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ । त्यसैले यहाँ प्रदेश ३ को राजधानी बनाउँदा राज्यले संरचना बनाउँदा लाग्ने खरबौं खर्च बच्छ । त्यो ठाउँ हेर्दैखेरि प्रदेशको राजधानी बनाउनलाई नै बनेको जस्तो देखिन्छ ।
यो ठाउँमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लगायतका कार्यालयहरु पनि छन् । यो ठाउँ वातावरणका हिसाबले पनि स्वच्छ छ र पहुँचका हिसाबले पनि सिंहदरबारबाट ५/६ किलोमिटरमात्रै टाढा छ । ३ नम्बर प्रदेशका १३ जिल्लाका लागि भौगोलिक सुगमताका हिसाबले यो ठाउँ उपयुक्त छ ।
राजधानी दाबी गरेका काभ्रे र ललितपुरका साथीहरुले पनि भक्तपुरलाई प्रदेशको राजधानी बनाइयो भने हामी बोल्दैनौं भनेको अवस्था छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाजीले आफ्नो संकटमा परेको राजनीतिलाई बचाउने उद्देश्यले हठात हेटौडा निर्णय गर्नुभयो । हेटौडामा प्रदेशको राजधानी बनाउनेबारे अध्ययन समितिले भनेको थिएन । सिन्धुलीदेखि रसुवासम्मका साथीहरु कसैलाई पनि हेटौडा सेन्टर पर्दैन । मैले हेटौडाको निश्चित भूगोलको विरोध गर्न खोजेको होइन, तर १३ जिल्लाका मानिसहरुलाई हेटौडाभन्दा काठमाडौं चाँडो आइपुगिन्छ । हेटौडा धेरै कोल्टे पर्छ । यी सबै हिसाबले प्रदेशको राजधानी भक्तपुरलाई नै बनाउनुपर्छ ।
अन्यत्र पनि बिराटनगर कि धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भन्नेबारेमा विवाद छ । इटहरीलाई विकल्पका रुपमा लिइराखिएको थियो । यसबारे सरकारले सामान्य छलफल पनि गरेन । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरुसँग एकचोटि बसेर छलफल गरेको भए समस्या हल हुन्थ्यो होला ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै प्रदेश नं ७ मा डोटी कि धनगढी भन्नेमा ठूलो आन्दोलन भइराखेको छ । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेकाहरुसँग बसेर छलफल गरेको भए त्यहाँ पनि समाधान निस्कन्थ्यो होला । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीति जोडिएको ठाउँमा पनि दीर्घकालीन ढंगले छलफल गरेको देखिएन ।
झण्डै दुई तिहाइ होल्ड गरेको वाम गठबन्धन र झण्डै बहुमत होल्ड गरेर बसेको एमालेसँग उहाँहरुको कुनै छलफल सहकार्य छैन । र, प्रदेश प्रमुखहरु तोक्ने कुरामा राजनीतिक दलसँग आवद्धता नरहेकाहरुलाई तोक्नुपर्नेमा चुनावको अगाडि पार्टी प्रवेश गरेका मान्छेहरु, मेयरका उम्मदेवार भइसकेका मान्छेहरुलाई प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ ।
तर, फेरि पनि हाम्रो दायित्व के हो भने परिस्थितिलाई भड्काएर होइन, सम्हालेर लानुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ । र, भोलि यी समस्यालाई हल गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका यही हुन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्रि देउवा भन्छन : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक सेनामाथि हस्तक्षेप
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पोखरामा पुगेर सरकारविरुद्ध फेरि कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।ओली सरकारले १
प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्छन्-‘आवश्यक परे पेट्रोल उत्खनन गर्छाैं’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतीय गाडीको कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् बिहीबार काठमाडौंमा सूरु भएको
लगानी सम्मेलनबारे विकास साझेदार संस्थालाई सरकारले गरायो औपचारिक जानकारी
काठमाडौं। सरकारले ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ बारे कूटनीतिक नियोग तथा विकास साझेदार संस्थाहरुलाई औपचारिक रुपमा जानकारी
फोरम र नेकपा बीच एकता हुने
काठमाडौं। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच पार्टी एकता हुने भएको छ